ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုခြင်း: ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2009) ၏ multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - သင်၏ဦးနှောက် Porn တွင်
Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2009 Oct;12(5):545-50. doi: 10.1089/cpb.2008.0346.
Tsitsika တစ်ဦးက, Critselis E ကို, Kormas, G, Konstantoulaki E ကို, Constantopoulos တစ်ဦးက, Kafetzis: D.
အပြိုမ ကျန်းမာရေးယူနစ် (AHU)၊ ကလေးအထူးကုဌာနဒုတိယ၊ P. & A. Kyriakou ကလေးဆေးရုံ၊ အေသင်အမျိုးသားနှင့် Kapodistrian တက္ကသိုလ်၊ ဆေးကျောင်း၊ ဂရိဆေးကျောင်း။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အဆိုပါလေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက်များသည်ပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ဖို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်, ညစ်ညမ်းသည်အင်တာနက်ဆိုဒ် (PIS) ၏ဂယက်ရိုက်ဂရိမြီးကောင်ပေါက်အကြားကိုသုံးပါ။
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု 529 ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ဂရိအထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားကောက်ယူခဲ့သည်။ ခြုံငုံ PIS အသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့ 19.47% (ဎ = 96) ဖြစ်ခဲ့သည်။ PIS အသုံးပြုသူများသည်များထဲတွင် 55 (57.29%) ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 41 (42.71%) မကြာခဏ PIS အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။
, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအတှကျအငျတာနကျသုံးစှဲ (AOR = 8.33; 95% CI = 3.52-19.61); ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော PIS အသုံးပြုမှုများ၏ခန့်မှန်းအထီးကျား, မ (5.26% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI] = 95-1.78 ပြုပြင်လေးသာမှုအချိုးအစား [AOR] = 15.55) ပါဝင်သည် နှင့်ဝယ်ယူမှု (AOR = 2.95; 95% CI = 1.48-5.91);, အခန်းပေါင်း (3.06% CI = 95-1.22 AOR = 7.67) chat ။ , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအတှကျအငျတာနကျသုံးစှဲ (AOR = 19.61; 95% CI = 4.46-83.33); မကြာခဏ PIS အသုံးပြုမှုများ၏ခန့်မှန်းအထီးကျား, မ (7.39% CI = 95-2.37 AOR = 23.00) ရှိ. , တပတ်ကအင်တာနက်နှုန်း 10 နာရီထက်လျော့နည်း (AOR = 1.32; 95% CI = 1.10-1.59) ကိုအသုံးပြုပါ။
Non-PIS အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော PIS အသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့်ပြဿနာများရှိသည်ဖို့နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် (လေးသာမှုအချိုးအစား [OR] = 2.74; 95% CI = 1.19-6.28); မကြာခဏ PIS အသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့်ပြဿနာများရှိသည်ဖို့သိသိသာသာပိုပြီးခဲ့ကြသည် (OR = 4.05; 95% CI = 1.57-10.46) နှင့်နယ်စပ်ဒေသ prosocial ရမှတ် (OR = 4.22; 95% CI = 1.64-10.85) ။ T ကHUS, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောနှင့်မကြာခဏနှစ်ဦးစလုံး PIS အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်သိသိသာသာဂရိမြီးကောင်ပေါက်အကြားလူမှုရေး maladjustment နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြသည်။
Tsitsika et al ။ (2009) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အလားအလာသက်ရောက်မှုတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ဂရိမြီးကောင်ပေါက် (N ကို = 529) ကြားတွင် cross-section လေ့လာမှုကောက်ယူ; တွေ့ရှိချက်ကြောင်းအကြံပြု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့နေသောဂရိမြီးကောင်ပေါက် "ဆက်ဆံရေးဆီသို့လိင်နှင့်အထင်မြင်မှားစေသောသဘောထားများနှင့် ပတ်သက်. လက်တွေ့သဘောထား" ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ (စ။ 549) ။
Tsitsika et al အားဖြင့်ဖျောပွလေ့လာမှု။ (2009) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာအင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုနှင့်လူမှုရေး maladjustmen အကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြt ကို (Tsitsika et al ။ , 2009) ။ အထူးညစ်ညမ်း၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှုကိုညွှန်ပြသူကိုမြီးကောင်ပေါက်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိမှာအားလုံးညစ်ညမ်းလောင်ဘူးသောသူကဲ့သို့အကငျြ့ကိစ္စများရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်မကြာခဏစားသုံးသူပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များညွှန်ပြပေးဖို့သိသိသာသာပိုပြီးခဲ့ကြသည်အဖြစ်နယ်စပ်ဒေသစွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် (Tsitsika et al ။ , 2009) ။